Abathengisi, ngaba intengiso yeFowuni kwipotifoliyo yakho?
Kutheni ungasebenzisi iFowuni?
NgeCawa, Agasti 9, 2009 NgeCawa, ngo-Epreli 24, 2016 UAdam Omncinci
Hayi, andithethi ukuba abantu baqhuba iibhilibhodi ezijikeleze idolophu. Ndithetha ukufikelela kubathengi kunye nabaxhasi ngefowuni ephathekayo. Oku kubhekiswa kuko njenge UkuThengiswa kweSelula kodwa ndibone inani labantu abalibizayo Intengiso eselfowuni mva nje. Kukho inani leendlela ezahlukeneyo ze UkuThengiswa kweSelula; i-SMS/ Ukuthengiswa kwemiyalezo ebhaliweyo, amaphepha ewebhu aphuculweyo kunye nokusetyenziswa kweselfowuni zezona zibalulekileyo.
Ngelixa uhlobo ngalunye lwentengiso ehambayo lunezinto eziluncedo kunye nezinto ezingalunganga kwaye zonke zibanga ukuba zinenqanaba eliphezulu lokuhlawulwa, eyona nto inentengiso yentengiso engenakuphikiswa kukuba iyasetyenziswa ukwanda. Kubonakala ngathi sikwisimo esifana nentengiso ye-imeyile ngasekupheleni kweminyaka yama-90s nakwii-2000s zokuqala, kwi-cusp yokuba yeyona nto iphambili kwezona ndlela zokuthengisa.
Sele sibona iimveliso ezinkulu kunye namashishini amancinci anyusa uhlobo lwenkqubo yokunyaniseka ebandakanya imiyalezo ebhaliweyo. Iilebheli ezinkulu zomculo zithengisa umculo nge iphepha lewebhu elungiselelwe mobile. Iinkampani zesoftware zikhupha iinkqubo eziyilelwe kuphela isixhobo esiphathwayo. Imiboniso kamabonwakude isebenzisa iSMS ukwenza ingeniso ngeentlawulo zemiyalezo yepremiyamu yokuvota ngokusebenzisana. Abapolitiki baxhasa abaxhasi ngamaxesha ngokusebenzisa izilumkiso eziphathwayo.
Ukuthengisa ngeselula kunezibonelelo ezimbini ezingakholelekiyo kunenye intengiso kunye neenkqubo zokuthengisa:
Abantu baphatha iifowuni eziphathwayo kunye nabo-ke ukufika ngexesha elifanelekileyo kunye nokuqinisekisa ukuba umyalezo ufika kumamkeli yinto eqinisekileyo! (Kuza noxanduva, ewe.)
Ukungena kumthengi kwintengiso yeselfowuni kukubonelela nge uqhagamshelo ngqo neenombolo zabo zeselfowuni.
Umzekelo omnye wokusebenzisa esi sixhobo une Isicwangciso sokuthengisa izindlu nomhlaba. Sinikezela ngearhente yokuthengiswa kwezindlu kunye neeplacards zokubeka kwipropathi yabo apho abathengi abanokubhala umyalezo ngenombolo yeenkcukacha ezongezelelweyo malunga nepropathi kunye nokhenketho olubonakalayo. Kwangelo xesha umthengi sele ekhethe kwaye efumana iinkcukacha, iarhente yokuthengisa izindlu nomhlaba ikwaziswa ngesicelo kunye nenombolo yefowuni yomthengi enokubakho! Sikwaphucula ezinye zeakhawunti ngefowuni erekhodiweyo evela kwiarhente.
Oku kunika umthengi lonke ulwazi aludingayo-kunye nokubonelela ngearhente yokuthengiswa kwezindlu kunye neendlela zonxibelelwano kunye ukubandakanya umthengi. Ukubeka iikopi kwiimpawu zeyadi akuvumeli inqanaba lokuzibandakanya!
Ke umbuzo ngulo, wenza ntoni ukuthatha ithuba lokuthengisa kunye neendlela zokuhambisa ezihambayo? Ngawaphi amanyathelo okuthengisa ashukumisayo inkampani yakho eyazisa? Ukuba uyi arhente yentengisoNgaba ukuthengisa okuSelfowni kwipotifoliyo yakho? Kufanelekile ukuba kube njalo!
tags: intengiso yeselulaUkuThengiswa kweMfono kunye neThebhulethiurhwebo mobileiindlela zokuthengisa ezihambayo
Izithuba ezingama-2,000 kwaye siyaqala nje!
Ndilapha Emva kwakho…
Agasti 10, 2009 ngo-6: 07 PM
Ndiyazi ukuba ubukhe wamgxeka kakhulu u-ChaCha kwixa elidlulileyo, kodwa NDIYA KUTHANDA ukukuqinisekisa ukuba senza izinto ezithile ezimangalisayo ngeNtengiso yeFowuni. Ndingathanda ukukumema kwi-webinar esiyibambayo kunye ne-VP yethu yeNtengiso yeNtengiso, uGreg Sterling, kunye ne-CEO ye-4INFO- enyanisweni, kugxilwe kwi-webinar kuku-ENGAGING umthengi.
Ndiyathemba ukuba ungaya!
Agasti 11, 2009 kwi-1: 23 AM
Izimvo ezinkulu. Ndicinga ukuba iselfowuni ibonakala iyothusa kubantu abaninzi, kodwa ayisiyonto imbi ukuba uthetha nje nabantu abalungileyo.
Izinto ezinomdla ozenzayo ngekona yezindlu. Kuya kufuneka ujonge iposti kaDarren Herman (http://bit.ly/10t0cOKwingingqi.
Agasti 11, 2009 kwi-4: 00 AM
Sukuyithatha eyam i-ChaCha-abuse-ndiyazi ukuba kukho itoni yabantu abanetalente engaphaya. Ndigxeka kakhulu inkxaso-mali kaChaCha esidlangalaleni xa kukho abafana abanjengam abaneerekhodi eziqinisekisiweyo kunye nemibono emikhulu yokuxhasa imali… mhlawumbi yinto encinci yomona. 🙂
Ndiza kujonga i-webinar! Enkosi kakhulu ngesimemo. KUNYE-uChaCha usamkelekile ukwenza iposti yendwendwe apha kwiBhlog yeTekhnoloji yeNtengiso!
Agasti 11, 2009 ngo-6: 40 PM
Kakhulu! Kwaye ndicinga ukuba ndiza kukusa kwibhlog yeendwendwe! Khangela ukuba kuza ngendlela yakho.